Oceanfront Cliffside Master Suite kwi Ranch yoLwandle
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguMisty & Gary
I-Oceanfront Cliffside 2 Room Master Suite eThe Sea Ranch, ithe ngcu phezu koLwandlekazi lwePasifiki. Iimbono ezinomtsalane zolwandle kunye nolwandle olusuka kumagumbi akho ama-2 adibanayo. Akukho ndawo yangaphakathi ekwabelwana ngayo naluphi na uhlobo, i-100% eyahlukileyo, iphiko lokungena langasese. Bukela ukutshona kwelanga, ukusefa, iminenga kunye nabantu. Imincili ukuya kwizaqhwithi zasebusika ezisuka kubuntofontofo bale ndlu ishushu, i-ultra yabucala yaba-2 kwiphiko elahlukileyo. Ngaphandle koqhagamshelwano. Indawo yokupaka ekhuselekileyo, ekhuselekileyo. Itshaja yasimahla yeTesla yeendwendwe. I-WiFi yokuthotyelwa. AYIFANELEKILEYO ABANTWANA.
Sibonelela abantu abatshatileyo okanye abantu abafuna indawo yokuhlala yabucala ephambi kolwandle, ehleli eliweni. Ukungaqhagamshelwa, iphiko elahlukileyo, indawo yokungena yabucala, indawo yokupaka ekhuselekileyo, indawo yokupaka yabucala enezitulo ezijonge ePelican Bay, eChetco Point naseSporthaven Beach. Igumbi eli-2 elinendawo yokutyela, ifriji, imicrowave, umenzi wekofu.
Ungalubona kwaye uve uLwandlekazi lwePasifiki olukhulu kwindawo yakho, kwaye wonwabele iintaka ezininzi kunye neentlobo ngeentlobo zezityalo kunye neentyatyambo kwindawo entle enesiqingatha seehektare.
Yiva yonwabele ukutshona kwelanga, bukela abakhenkethi okanye iintsapho zidlala kuLwandle lweSporthaven, jonga iHumpback okanye iGrey Whales okanye ubone iOsprey ibhabha “nomgibeli” enika intlanzi indlela yobomi bayo!
Siyazazi zonke iindlela zokukhwela intaba kwaye sinokukhokelela kwezinye zezona ndawo zihamba phambili kwi-Southern Oregon Coast, kwi-giant, i-redwoods endala yokukhula okanye ngaphandle kwiibhoni. Le ndawo yindawo yokudlala emangalisayo! AYIFANELEKILEYO ABANTWANA.
Kubucala, kuthe cwaka, kukhuselekile, nokufikelela ngokulula kokuhamba, ukuhamba nje imizuzu esixhenxe ukuya eSporthaven Beach, okanye, uqhube phantsi kubini. Edolophini ngaphandle kokuba edolophini. Kufuphi nokutya, imivalo kunye neevenkile. Enkosi ngokuqhuba ngokucotha kakhulu kwi-Bathiany Lane. Kukho abantu abadala, izinja kunye nabantwana kule ngingqi.
Umbuki zindwendwe ngu- Misty & Gary
Sibuhlonipha ngokunzulu ubumfihlo bakho kwaye senza konke okusemandleni ethu ukuhlala isitshixo esisezantsi ngelixa sifumaneka ngokupheleleyo ukuhlangabezana neemfuno zakho. Abamkeli bakho abanamava, uGary kunye noMisty basebenza kwaye bahlala kwindawo yendlu enkulu. Iindwendwe zinokufowuna, zinkqonkqoze, zithumele i-imeyile, zibhale okanye zisebenzise i-airbnb app kunxibelelwano. Senza ishishini lethu ukukunika eyona ndawo yabucala. Ngelixa i-Master Suite yakho isekhaya lethu, ikwiphiko lasemantla kwaye asinazo iindawo ekwabelwana ngazo okanye eziqhelekileyo zalo naluphi na uhlobo ngaphakathi. Singakubona ngaphandle kwidesika okanye emaweni. :)
Sibuhlonipha ngokunzulu ubumfihlo bakho kwaye senza konke okusemandleni ethu ukuhlala isitshixo esisezantsi ngelixa sifumaneka ngokupheleleyo ukuhlangabezana neemfuno zakho. Abamke…
UMisty & Gary yi-Superhost